MAJAYAHAN & DHALAN....
Cusman M Cali
Salaan dabadeed waxaan doonayaa inaan halkaan ku soo bandhigo aragtitayda ku aadan dhibta ka taagan aaga dhalan iyo Majayahan isla markaana tala ka soo jeediyo.
Marka koowaad Dhalan iyo Majayahan waa laba tuulo oo ku yaala dhanka woqooyi (xeeb u jeedka buuraleyda Golis). Dawladii dhexe ee soomaliya oo heshiis kula jirtey shirkad Bulgaria ah ayaa muddo ka soo saaraysey nooc macdan ah oo la iigu sheegay Tin hawshaasina waxay istaagtey intii dawladu jirtey.
Intii mudadaas ka dameysey waxay ahaayeen tuulooyin ay isticmaalaan xoola dhaqatada iyo xijiyaysatadu si ay u dhigtaan raashinkooda ugana iibsadaan.
Sanadkii la dhoofay ayaa waxaa soo ifbaxay in nin Terry la yiraahdo oo Boosaso horay ugu joogey hawlo uu sheegay kaalmaynta caruurta uu isu rogey shirkad shildaalka iyo macdanta baarta (Concort Private LTD) isla markaana heshiis la galay maamul goboleedka Puntland taasoo ay ka qayliyeen badi dadkii warkaa helay oo Soomaalida ahaa baaritaano badan oo la sameeyeyna ay tuhun geliyeen jiritaanka iyo daacadnimada shirkadaas. Intaas ka dib ayaa haddana waxaa soo baxay in Shirkad La yiri waa Ustaralian lana yiraahdo Range Resource LTD inay hawshii la wareegtey.
Shirkadii Bulgaria ee macdanta ka qodi jirtay Majeyahan / dhalan waxaa magaceeda la oran jirey Geomin.
(Waxaa xusid mudan in Bishii October 2002 ay dalka Bulgaria ku kulmeen daljiraha Soomaaliya u fadhiyey Liibiya, Dr. Maxamed Xuseen Maxamed "Ilkadahab" iyo madaxweynaha Bulgaria, Georgi Parvanov, oo kaddib markii uu daljiruhu u gudbiyey warqad uu ka sidey madaxweynihii Dawladii Kumeel gaarka ahayd ee Carta lagu soo dhisay, Dr. Cabdulqaasim Salaad Xasan, in markaas lays la sooqaadey in shirkaddii Geomin ee ka shaqayn jirtey mashruucii Majeyahan iyo Dhalan ee baarista macdanta dib loo soo celiyo, lagana dhiso halkaas wershed samaysa crystals-ka(qaruuradaha)... [ISHA: SomaliTalk.com | 2002].
Muddada hawshaan socotey shacabka Puntland wax tafaasiil ah oo dhaafsiisan shidaal iyo macdan baa la soo saaraya looma sheegin Baarlamaankii metelayeyna maba ansixin.
Bishan bilowgeedii ayaa ciidan ka baxay Bosaso waxay aadeen Majayahan iyo Dhalan oo ka mid ahaa meelii suntanaa iyadoo weli shacabku war la'ayahay arintaasina waxay sii kordhisay shakigii laga qabay shirkada waxayna iska horkeentay dadkii degaanka iyo ciidamadii tegey. Dhacdadaa waxaa ka faa'iidaystey dad badan oo iyaguna dagaal oogayaal kale ah oo dhiigga dadka iyo mushkiladaha noloshooda ku xiray.
Waxaa ka mid ah dad iyagu reer ahaan ka soo jeedda deegaankaas una shaqeeya maamulka isku magcaabay somaliland kuwaasoo sida qabqablayaasha kale hadba meel u orda waxaan dhibaato ahayna aan ummada ku soo kordhin iyo kuwa jooga maamul goboleedka Puntland oo iyaguna dano kale oo beeleed leh oo weli aaminsan in beelnimo meel lagu gaaro.
Waxaa kuwaas ka daran kuwa website-yada qoraalada geliya oo ku qora dhul baa reer hebel leeyahay iyo ma leh. Hadaba waxaan tala ahaan ugu soo jeedinayaa.
1. Kuwa la shaqaysta Maamulka Isku magcaabay Somaliland, fadlan dadka waxba tarimaysaan idinkuna wax is tarimeysaane dantiina garta ogaadana inaydinaan ka helayn Hargeysa waxa Ismaciil Buubaba ka waayey.
2. Dadka website-ka qoraalada gelaya waxaan leeyahay Ilaah uga mahadceliya inuu qoraal idin baray ogaadana waxaad qortaan inay noqonayso marag meel idiin ooli doona.
3. Maamulka Puntlandna waxaan leeyahay, waxaad haysataa shacab aydin u qabin waxbarasho, Caafimaad iyo adeeg bulso oo kale isla markaana Cashuur bixiya. Ha iska gaagixina hashan irmaan ee idin ogol mar haydinaan wax kale tareyn.
4. Shacabkana waxaan leeyahay yaan danayste isagu wuxu helo jeebka ku shubta caruurtiisana meelaystay aanu idin maan-gadin oo reer ahaan idiinku yeeran markii dantuu lahaa fashilanto. Kana faa'iidaysta waayo aragnimadaa ka hesheen 16-kii sano ee aad Cashuurta bixineyseen wixii idinkaga soo noqday. Ogaadana waxaa la adeegsado oo dhintaa waa idinka kan idin adeegsada caruurtiisuna ma dhimato isna ma tago meel xabadi ka dhacayso.